စပိန်မြေမှာ တစ်ဖန်ပြန်လည်တောက်ပဖို့ ပြန်လာပါ့မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ တစ်ချိန်ကရီးရဲလ်နည်းပြကြီး ဇီဒန်း.... - YTV Channel
Home | Sports | စပိန်မြေမှာ တစ်ဖန်ပြန်လည်တောက်ပဖို့ ပြန်လာပါ့မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ တစ်ချိန်ကရီးရဲလ်နည်းပြကြီး ဇီဒန်း….
စပိန်မြေမှာ တစ်ဖန်ပြန်လည်တောက်ပဖို့ ပြန်လာပါ့မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ တစ်ချိန်ကရီးရဲလ်နည်းပြကြီး ဇီဒန်း….
စပိန်ကလပ် ပီအက်စ်ဂျီမှ နည်းပြကြီး ပိုချက်တီနို ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်မှာ တစ်ချိန်က ပရိသတ်ကြီးရဲ့အချစ်တော် ဇီဒန်း ကို နည်းပြအဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်... ဇီဒန်းဟာ လက်ရှိမှာနည်းပြလောကကနေ ခဏတာ အနားယူပြီး ခရီးလွန်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်....
မန်ယူမှဆိုးရှား ထွက်ခွာပြီးနောက် ဇီဒန်းကိုနည်းပြအဖြစ် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် ဇီဒန်းကိုယ်တိုင်က ငြင်းပယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်....
ပရီးမီးယားကလပ်များထပ် စပိန်နှင့် ပြင်သစ်ကလပ် တို့မှာသာ နည်းပြချင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာကိုလည်း သတင်းများရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်...
ယခုအခါမှာတော့ စပိန်မြေကို ပြန်လည်အခြေချဖို့ အကြောင်းပေါ်လာခဲ့ပြန်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်...ပီအက်ဂျီအသင်းကို နည်းပြပေးရန် တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုကို ယမန်နေ့က ပီအက်ဂျီ ဖက်မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်...တစ်ချိန်က ရီးရဲလ်မှာ ဖလားသုံးလုံး ရယူပေးထားတဲ့ နည်းပြကြီး ဇီဒန်းအနေနဲ့ ယခုအခါမှာလည်း စပိန်မြေရဲ့ ပီအက်ဂျီ ကလပ်ကို ရောက်ရှိသွားမလားဆိုတာ နောက်လာမယ့်သတင်းများမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...ဇီဒန်းအနေနဲ့ပြောပြချက်အရတော့ လက်ရှိသူ့အနေနဲ့ အတည်ပြုချက်မချရသေးဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်...
ကဲ ဘောလုံးဝါသနာပရိသတ်ကြီးတို့ရေ နည်းပြကြီးဇီဒန်းကို ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ရော ဘယ်အသင်းမှာနည်းပြစေချင်လဲဗျ...ယခင်နှစ်အစောပိုင်းတွေက ရီးရဲလ်မှာ တောက်ပခဲ့တဲ့ နည်းပြကြီးအနေနဲ့ ဘယ်အသင်းကိုရောက်ရှိသွားမလည်းဆိုတာ စောင့်မျှော်ရင်း အစောကပြောထားတာလေးကို ကွန့်မန့်လေးမှာ ဝင်မန့်ပေးသွားပါဦးနော်.....